Fiasan'ny Global Positioning System (GPS) - OMG Solutions
Ny GPS fanafohezana dia midika ho an'ny Global Positioning System - nadika: Global Positioning System. Ny anarana ofisialy (lava) dia Navigational Satellite Timing and Ranging - Global Positioning System, na NAVSTAR GPS amin'ny teny fohy.
Ny zava-misy lehibe indrindra:
-Ny teknolojia novolavolaina tamin'ny Departemantan'ny fiarovana amerikana hatramin'ny 1970.
-GPS napetraka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 17.07.1995.
-Predensialor: NNSS (Rafitra Satelite Navigation Navy) an'ny tafika an-dranomasina amerikana, "Transit" avy eo
Safidy GPS: rafi-pandaharana satelita manerantany avy any Rosia, China ary Eropa
-GLONASS no tambajotra satelita Rosiana (miasa).
-Beidou no anaran'ilay rafitra sivily sinoa (eo ambany fandrosoana).
-Galileo no anaran'ilay rafitra satellite an'ny EU natomboka tamin'ny Desambra 2016.
GPS tracker, zanaky ny GPS fanaraha-maso ihany koa na GPS transmitter antsoina hoe milaza aminao amin'ny tanana iray, izay misy ny toerana misy ny GPS, noho izany ny olona iray na ny fiara aza. Fa ahoana no fanamboarana GPS? Inona no ilaiko amin'izany? Sarotra ve izany? Mila rindrambaiko ho an'izany ve aho? Manazava izany aminao izahay amin'ny fomba toy izany aorian'izay, afaka mahita fiara na olona ianao.
Mba hahafahanao hahatakatra hoe nahoana ny GPS Tracker dia fitaovana iray azo tanterahina sy azo ampiharina toy izany, mila mamantatra ny fomba fiasa ianao. Voalohany, ilaina ny mari-pahaizana antsoina hoe GPS. Ankehitriny dia misy fomba roa ahafahan'ny fifandraisana: na amin'ny zanabolana na amin'ny karatra SIM.
Inona no GPS Tracker?
Mametraha fotsiny, GPS Tracker dia telefaona finday, tsy misy fisehoana ary tsy misy fitendry. Ary koa, mbola misy chip kely GPS ao amin'ilay tracker, satria mety manana iray amin'ny findainao ianao. Ny ankamaroany ireo GPS trackers dia mbola somary kely ihany, matetika ny haben'ny matchbox fotsiny.
Ahoana no ahatongavan'ilay toerako?
Tena mora. Mila karatra SIM aloha ianao, fa ny karatra prepaid tsotra dia ampy. Raha mbola tsy nanapa-kevitra ianao amin'ny kara-panala SIM na mbola eo am-pitadiavanao azy dia mijery ity karatra SIM mety ity. Ny GPS Tracker dia mampiasa ny sombin-tariby GPS ao amin'ilay fitaovana mba hamaritana ny toerany ary alefaso any amin'ny vavahadin-tserasera GPS an-tserasera malalaka izany. Izany dia atao amin'ny alàlan'ny tamba-jotra finday. Ao amin'ny vavahadin-tserasera momba ny fanarahan-dia an'i GPS, dia voatahiry ity angon-drakitra ity ary ho hitanao eo amin'ny sarintany ny fifindrana GPS. Raha tsy te-hampiasa mpizara GPS toa anay izahay dia afaka miantso ilay fitaovana na mandefa SMS azy ary hamaly anao amin'ny alàlan'ny SMS miaraka amin'ny rohy Google Maps. Mazava ho azy fa mahazo aina kokoa ny rindrambaiko fanarato GPS eto amintsika noho ny tsy andefasana SMS isaky ny misy, satria raha mampiasa ny vavahadin-tseraseranay ianao dia mandeha ho azy ny fifandraisana maharitra miaraka amin'ny mpanamory GPS. Tsy mila manao zavatra hafa afa-tsy ny fidirana amin'ny anaran'ireo mpampiasa anao ao amin'ny vavahadinay izahay ary ho hitanao ny toerana misy ilay fiara na ilay olona.
Ahoana ny fomba fiasan'ny mpizara GPS / vavahadin-tserasera?
Ny GPS Tracker anao dia afaka mandefa anao ny toerana amin'ny alàlan'ny SMS na mivantana sy mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny tamba-jotra finday mankany amin'ny mpizara GPS. Ny vavahadin-tseraseran'ny GPS manara-penitra antsika dia mandray izany data izany, manombatombana azy io ary mitahiry izany data izany ao anaty angona. Saingy ianao amin'ny maha-mpampiasa anao dia tsy misy ifandraisany amin'ireto foto-kevitra ara-teknika ireto satria manokatra ny vavahadin-toerana ihany ianao, miditra ny anaranao sy ny tenimiafinao ary manana ilay toerana Live amin'ny solosainao, tablake na findainao.
Ny vavahadin-tsivana antsoina hoe "tracking" dia ilaina fa tsy ho an'ny olona ihany fa ho an'ny fanaraha-maso ny biby na ny fanenjehana fiara. Amin'ny alàlan'ny vavahadin-tserasera iray toy izany dia mahazo tombony maromaro indray mandeha ny mpampiasa. Ny angona peripheral, ary koa ny toeran'ny GPS tracker ankehitriny, dia azo jerena tsara. Matetika, misy tatitra sy fiasa marobe hita izay mamela ny fanarahan-dia sy làlana tsara. Toy izany koa no aharihary ny mombamomba ny fiainana serivisy sy ny fotoana fitsangatsanganana. Rehefa avela ny faritra iray, dia azo atao ny fanairana. Ny angon-drakitra voaangona dia fintinina amin'ny vavahady toa izany. Ao amin'ny vavahadin-tserasera, azo atao ny manamboatra ny tracker, izay miasa lavitra. Mba hitantanana ity matihanina ity dia tokony hampiasa ny programa mety.
GPS Tracker: Izy ireo dia mety amin'izany
Ny voalohany sy lehibe indrindra, ireo mpandray GPS dia ampiasaina amin'ny toerana misy ilay mpampiasa. Ohatra amin'ny endriky ny lisitry ny sarintany amin'ny smartphone. Ny fampiharana sasany dia nohavaozina ho an'ny tanjona manokana, toy ny bisikileta an-tendrombohitra na ny fitsangantsanganana.
Tanjona iray hafa ny famaritana ny toerana na ny biby fiompy. Ny voalohany dia ampiasaina amin'ny fialamboly malaza «Geocaching», karazana haza lambo amin'ny GPS. Ny tranga faharoa dia mety hahaliana ny ankamaroan'ny tompona alika izay te-hivezivezy eny ivelany miaraka amin'ny sakaizany akaiky indrindra, izay amelana azy indraindray. Miaraka amin'ny vozon'alika alika GPS, ny tompony dia afaka mahita ny alikany na oviana na oviana, na dia tsy hitan'ny maso sy ny lazany aza izany.
Ny hafainganana ihany koa dia azo refesina amin'ny alàlan'ny fikarohana ny toeran'ny zavatra iray amin'ny fotoana maharitra ary ny fandrefesana ny elanelan'ny fe-potoana roa. Izany dia atao amin'ny alàlan'ny fitaovana fanaraha-maso fiara, izay mampiseho anao koa ny hafainganam-pandehany amin'ny kilometatra isan'ora amin'ny fisehoana. Amin'ny ankapobeny, ny satelita na onjam-peo bebe kokoa, marina kokoa ny toerana misy anao.
Ny tracker GPS dia matetika antsoina hoe mpanoro lalana, fitaovana fanaraha-maso, voromahery na toy ny tracker. Tsy ny fampisehoanao atletisma ihany mandritra ny jogne sy ny mihazakazaka na ny fitsangatsanganana dia mety ho tsara kokoa hosoratana sy voaorina tsara kokoa, fa ny fitaovana dia mihoatra lavitra. Misy faritra maro ahafahana manatsara ny fiarovana amin'ny ankapobeny amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso GPS. Ohatra, raha manahy ny ray aman-dreny fa tonga soa aman-tsara any an-tsekoly ny zanany, dia misy toro-lalana manokana ny GPS Tracker. Mazava ho azy fa mihatra amin'ny fomba mody ihany koa izany. Amin'ny vonjy maika, ny olona voan'ny dementia dia afaka mahita haingana haingana. Raha misy lozam-pifamoivoizana na fiantsoana fanampiana amin'ny fialan-tsasatra na amin'ny dia dia ilaina dia manome fiarovana bebe kokoa ihany ny fitaovana. Ho an'ny fiara, moto, bisikileta ary fiara hafa, dia miaro amin'ny halatra tsara izany. Ary koa, ny entana na ny entana lafo vidy dia hita mora foana miaraka amin'ny GPS tracker sy GPS fanaraha-maso.
9164 Total Views 3 Views Today